Nyefee Music si gam akporo ka iTunes Mfe e
Zụrụ ihe iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, nanị na-ahụ na ihe niile music faịlụ ndị ka na gị ochie Android ekwentị ma ọ bụ mbadamba? Ọ ga-nyefee music si gam akporo ka iTunes, otú i nwere ike mmekọrịta gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod? Ọfọn, ọ bụghị ihe a nnukwu ihe. E nwere ọtụtụ ụzọ i nwere ike na-eso. Ke ibuotikọ emi m na-egosi gị 3 ụzọ ime Android ka iTunes music transfer mfe. Dị na-agụ na.
Part 1. Nyefee Android Music ka iTunes on Mac
Part 2. Copy Music si gam akporo ka iTunes on PC
Ebe ọ bụ na Mac ada ada na-ịchọpụta gam akporo ngwaọrụ, nyefee Android music ka iTunes, i kwesịrị a-atọ ndị ọzọ ngwá ọrụ maka enyemaka. Ebe a, m nwere ike ikwu Wondershare TunesGo (Mac), a ọkachamara Android ka iTunes transfer ngwá ọrụ. Ọ na-eme ya nnọọ mfe nyefee niile Android music, listi ọkpụkpọ na fim na-iTunes na 1 Pịa.
Cheta na: Nke a software n'ụzọ zuru ezu na-akwado ihe karịrị 2,000 gam akporo ngwaọrụ, gụnyere Samsung, Google, LG, HTC, Motorola, Sony, ZTE, Huawei, na ndị ọzọ. E wezụga, ọ bụ dakọtara na Android 2.1 na mgbe e mesịrị.
N'okpuru ebe bụ mfe nkuzi na otú nyefee music si gam akporo ka iTunes on Mac. Nnọọ na-eso ya.
Wụnye Wondershare TunesGo maka Android (Mac) on Mac.Run ya. Gị iTunes ga-agba ọsọ na-akpaghị aka. Ọ bụrụ na, na-agba ọsọ iTunes aka.
Jikọọ gị android ngwaọrụ Mac site na Android eriri USB.
Mgbe ejikọrọ, gị Android ekwentị ga-egosi n'elu ke akpan window. Pịa mmekọrịta iTunes ka Android.
Gaa na elu nri akuku na pịa. Na ekpe kọlụm, ị pụrụ ịhụ Music, Movies, Foto na Ndị Ọzọ (akwụkwọ) taabụ. Pịa otu taabụ ma họrọ gị chọrọ faịlụ. Mgbe ahụ, ịchịkwa pịa faịlụ. Na esiri-ala menu, họrọ Mbupụ na iTunes.
N'adịghị ka ebufe music si gam akporo ka iTunes on Mac, i nwere ike ime otu ihe ahụ kpam kpam na PC. Na akụkụ, asị m unu 2 ụzọ. Otu bụ free, ndị ọzọ kwesịrị ga-akwụ ụgwọ, ma ndị ọzọ mfe.
Ngwọta 1. Iji aka Nyefee Music si gam akporo ka iTunes maka Free
Ugwu gị gam akporo ngwaọrụ dị ka ihe mpụga ike mbanye na PC site na iji eriri USB.
Ịnyagharịa ka SD kaadị nke gị gam akporo ngwaọrụ na-emeghe ya, na idetuo music nchekwa na kọmputa.
Na-agba ọsọ iTunes na PC gị. Pịa Music n'okpuru Library ndekọ. Pịa File> Tinye nchekwa Library .... Ịnyagharịa ka Android media na nchekwa ma addd ya iTunes.
Ngwọta 2 Nyefee Music si Smartphones ka iTunes on PC / Mac
Ngwọta 3 Pịa Export Android Music ka iTunes
Tụnyere Ngwọta 1, usoro a na-ese ihe conveniently. Dị nnọọ 1 click, na ihe nile music na listi ọkpụkpọ ga-exported ka iTunes. All gị mkpa bụ Wondershare MobileGo for Android, ihe niile na-na-otu Android faili.
Rịba ama: The Wondershare MobileGo for Android arụ ọrụ zuru okè na otutu Android ntị na mbadamba, gụnyere HTC, Samsung na Sony. Enweta ihe Ama banyere akwado Android ngwaọrụ.
Mgbe nbudata software, ị pụrụ ịgbaso mfe nzọụkwụ mbupụ music na listi ọkpụkpọ site na Android ka iTunes.
Na-agba ọsọ software na PC na ifo si eriri USB jikọọ gị android ngwaọrụ PC.
Pịa Toolkit taabụ na hapụrụ kọlụm. Mgbe ahụ, na nke atọ akara - "Ngwaọrụ n'ihi Music na Movies Mme", pịa Export Music ka iTunes.
Detuo iTunes Music ka Android Ngwaọrụ
Mmekọrịta Android na iTunes Ịlụ Ihe ọ bụla
Olee otú mmekọrịta iTunes ka iPhone
Esi Free iTunes Songs
> Resource> iTunes> Nyefee Music si gam akporo ka iTunes Mfe